Avianca Airlines miditra amin'ny faha-100 taonan'ny asa tsy tapaka
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Avianca Airlines miditra amin'ny faha-100 taonan'ny asa tsy tapaka
Ao amin'ny 2019 Avianca Airlines mankalaza ny faha-100 taonany. Izy io dia manamarina ny toerany amin'ny zotram-piaramanidina tranainy indrindra any Amerika sy ny antitra indrindra eto amin'izao tontolo izao miaraka amina asa tsy tapaka.
Mba hametrahana ny fototra ho an'ny taonjato manaraka, maniry ny hampitombo ny fisian'i Eropa i Avianca ary hanohy hanome traikefa miavaka amin'ireo mpanjifany tohanan'ny teknolojia tsara indrindra misy.
"Manombatombana ny fahafaha-mampiditra frekuensi faharoa any London izahay ato ho ato," hoy i Hernan Rincon, tale jeneralin'ny filoha avianca Airlines. “Mikasika ireo toerana vaovao, Zurich dia toa manintona amin'ny toerana manaraka any Eropa noho ny toerana misy azy eo afovoan'i Eropa. Ankoatr'izay, mandinika an'i Roma sy Paris ihany koa ny kaompaniam-pitaterana, "hoy ihany izy.
Avianca Airlines mitazona fanatrehana matanjaka any Eropa amin'ny alàlan'ny hetsika samihafa:
1. New Boeing 787: Tamin'ny Oktobra 2018, nahazo ny Boeing 787 faha-787 an'i Avianca, izay ampiasainy manokana ho an'ny sidina mankany Eropa. Ny sambo fiaramanidina dia iray amin'ireo vaovao indrindra any The Americas - fito taona eo ho eo- ary ny sidina rehetra mankany amin'ity kaontinanta ity dia miasa amin'ny Boeing XNUMX, iray amin'ireo fiaramanidina maoderina indrindra eto an-tany.
Ity fiaramanidina ity dia mahazaka mpandeha 250, 28 amin'ny sokajy orinasa ary 222 amin'ny kilasy toekarena. Ny endriny revolisionera, miaraka amin'ny teknolojia fanapahana, dia mampihena ny vokatry ny havizanana sy ny jet lag. Ho fanampin'izay, manana rafitra fialamboly vaovao manidina izy, izay ekena ho tsara indrindra any Amerika Latina. Miara-mandray anjara amin'ny traikefa miavaka izy rehetra.
2. Tambajotram-pifamoivoizana: Avy any Bogota, ivon-toeran'ny Avianca, ny mpandeha eropeana dia manana fidirana amin'ny toerana mihoatra ny 100 ao Amerika toy ny: Cusco any Peru, Galapagos any Ekoatera, San Jose any Costa Rica, Medellin ary Cartagena any Kolombia, ankoatry ny hafa. Tamin'ny 17 Novambra, nitokana ny zotra Munich - Bogota ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ilay mpitatitra dia ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana latina voalohany miasa ao amin'ity seranam-piaramanidina
Avianca dia nekena ho Airline tsara indrindra any Amerika atsimo: na ny sidina lavitra na ny sidina lavitra na Skytrax, Trip Advisor, APEX, ankoatry ny hafa, noho ny traikefa nahafantaran'ny mpandeha azy avy amin'ny serivisy an-tanety sy ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny serivisy sidina.
Zimbabwe dia nanendry masoivoho vaovao momba ny fizahantany
Nakaton'ny FAA ny seranam-piaramanidin'i LaGuardia any New York, nijanona avokoa ny sidina niditra rehetra